Dalxiisayaashu way cararayaan, laakiin kaliya maahan COVID-19 jasiiraddan Greek
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Dalxiisayaashu way cararayaan, laakiin kaliya ma ahan COVID-19 jasiiraddan Greek
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Giriigga • News • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Turkiga • Wararka kala duwan
Dalxiisayaashu way cararayaan, laakiin kaliya ma ahan COVID-19 jasiiraddan Greek
Dalxiisayaashii jasiiraddan Giriigga ah ayaa baqday oo waxay galeen taleefannadooda gacanta si ay u helaan macluumaad una arkaan waxa dhacay. Wax yar ka dib, waxay ka soo qaadeen shukumaanada iyo dalladaha xeebta waxayna u baxeen qolalkooda, halka kuwa hurdayay ay ku soo tooseen dhawaqa maqalka ah ee diyaaradaha dagaalka ”wakiilka dalxiiska ee jasiiradda, Konstantinos Papoutsis, ayaa loogu sharraxay warqadda maxalliga ah.
Gelinkii dambe ee Isniinta, wakaaladaha safarka waxaa ka buuxay dalxiisayaal buuq badan iyo booqdayaal doonaya tikit soo noqosho doontii ugu horreysay ee Rhodes. Telefoonada ayaa "jajaban" wakaaladaha safarka ee jasiiradda fog.
Sababta maahan Coronavirus laakiin waa taxaddar coronavirus, adeegga doonta ayaa la joojiyay ilaa Maarso. Tirada dalxiisayaasha guud ahaan Turkiga laga soo bilaabo Janaayo ilaa Ogosto waxay hoos u dhacday 74 boqolkiiba marka loo barbardhigo isla mudadaas 2019. Kas, hawlwadeenada dalxiisyadu waxay ku qiyaasaan ganacsigooda labadii bilood ee la soo dhaafay inay u dhexeeyaan 60 iyo 90 boqolkiiba sannadihii caadiga ahaa.
Si fudud oo looga arki karo Kaş, Turkiga oo ka soo horjeedka gacanka ayaa fadhiya Kastellorizo, jasiirad yar oo Giriig ah oo ay ku nool yihiin 500 oo qof oo keliya. Meesheeda ugu dhow, waxay 2km (1 mayl) u jirtaa xeebta Turkiga. Kastellorizo ​​waxay 125km (78 mayl) u jirtaa jasiiradda weyn ee Griiga ee Rhodes ilaa galbeedka, waxayna kudhowaad 600km (373 mayl) u jirtaa dhulweynaha Griiga. Muranka sanadkan ayaa ku xeeran cidda iska leh biyaha ka shisheeya, kana sii qoto dheer Badda Dhexe.
Kas waxaa loo beddelay tan iyo 1990-yadii: marka hore dalxiis ka dibna xiriir wanaagsan oo lala yeeshay Kastellorizo ​​oo la yimid. Labadaba, in kastoo, loo hanjabay sannadkan: Cudurka faafa ee COVID-19 oo dhinac ah, iyo xiisadaha siyaasadeed ee sii kordhaya dhinaca kale.
Intii u dhexeysey Ogosto iyo Sebtembar, Turkiga iyo deriskiisa waxay ku dhex jireen iskahorimaad aad u sii xumaanaya oo ku saabsan biyaha lagu muransan yahay ee Bariga Dhexe, iyo xaqa loo leeyahay in lagu qodo kheyraad badan oo tamar ah.
Wax yar ka baxsan doonyaha raaxada iyo kahor hudheelada naadiga xeebta, waxaa yaal markab dagaal oo yar oo Turkish ah oo ku yaal Kas Marina. Ku xirnaanshaha halkan maalmaha qaarkood oo ku kormeeraya badaha kuwa kale, waa uun astaan ​​muujinaysa xagaaga aan caadiga ahayn ee xeebta koonfureed ee dalka.
Inkasta oo Qubrus - iyo biyaha ku xeeran - laga yaabo inay yihiin isha ugu dheer ee khilaafkaas, waa Kas, oo ah magaalo yar oo u dhexeysa buuraha iyo Badda Dhexe, taas oo u soo baxday inay diiradda saareyso xiisadihii dhowaa. "Dunida oo dhan ayaa daawaneysa!" Ayuu yidhi mid ka mid ah dadka deegaanka.
Si fudud oo looga arki karo Kas guud ahaan badda waxaa fadhiya Kastellorizo, jasiirad yar oo Griig ah oo ay ku nool yihiin 500 oo qof oo keliya. Meesheeda ugu dhow, waxay 2km (1 mayl) u jirtaa xeebta Turkiga. Kastellorizo ​​waxay 125km (78 mayl) u jirtaa jasiiradda weyn ee Griiga ee Rhodes ilaa galbeedka, waxayna kudhowaad 600km (373 mayl) u jirtaa dhulweynaha Griiga. Muranka sanadkan ayaa ku xeeran cidda iska leh biyaha ka shisheeya, kana sii qoto dheer badda Dhexe.
Laga soo bilaabo bartamihii bishii Ogosto, markab laga leeyahay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Oruc Reis oo ah hay'ad cilmi baaris dhul gariir wadata - oo ay galbinayaan maraakiib dagaal - ayaa muddo hal bil ah ku howlanaa khariidaynta rajada laga qabo qodista ceelasha biyaha lagu muransan yahay, tallaabadaas oo ay cambaareeyeen Giriigga iyo Midowga Yurub. Jawaab ahaan, maraakiibta dagaalka Griiga ayaa loo diray inay hadheeyaan flotilla turkiga, xitaa waxay keeneen shil yar oo udhaxeeya maraakiibta dagaalka turkiga iyo griiga. Wasiirka Arimaha Dibada Jarmalka Heiko Maas wuxuu ka digay in labada dhinacba ay "ku ciyaarayaan dab" halkaas oo "dhimbiil walba oo yar u horseedi karo masiibo".
Hase yeeshe Kas laftiisa, qaar yar ayaa u muuqda kuwo aad u walaacsan. Erdal Hacivelioglu, oo ah aqoon yahan ku takhasusay korantada iyo taariikhyahan hiwaayad ah oo taageera sheegashada Turkiga ee badda Mediterranean-ka, ayaa saaxiibbadiis fariimo ugu dirayay Kastellorizo ​​intii ay socdeen kullanku, isagoo si dhib yar u sheegay geopolitics-ka. Cay isagoo ku cabaya bakhaarkiisa hortiisa, wuxuu sharaxayaa xiriirka dheer ee ka dhexeeya labada magaalo.
Labaduba dabcan waxay mar wada ahaayeen deris isku boqortooyadii Cusmaaniyiinta. In kasta oo Kas uu had iyo jeer ahaa Turki iyo Kastellorizo ​​badan oo Giriig ah, khadadka u dhexeeya labadooduna aad bay uga yaraayeen. Kas waxaa ka buuxa guryo Giriig ah oo qurux badan, oo leh bougainvillaea. Kahor intaanay dadku is dhaafsan 1920-meeyadii - halkaasoo 1.5 milyan Giriigga ku hadla ee Anatolia loo diro Griiga - waxay lahayd dad aad u tiro badan oo Griig ah.
Dhammaan halkan ayaa rajeynaya inaysan jirin wax sii kordhaya.
Hase yeeshe, in yar oo Kas ah ayaa rumeysan inay ka sii culus tahay taas. Waa siyaasad uun. Waa ciyaaraha carruurta, ”ayuu yidhi Turhan, isagoo qoslaya“ Diyaarad helikobtar ah ayaa timid. Markab dagaal ayaa imanaya. Laakiin sababta? Maxay tahay sababta aan ugu noqon karno cadaw iyaga? Waxaan la mid nahay qoys. ”
Expo 2020: Emirates Airlines ilaa Seychelles
Guddiga Dalxiiska Afrika oo sii wada Midnimada: Hadda Rwanda
Taageerada dowladda ayaa muhiim u ah duulista kaarboonka cusub...
Bandhigga cusub ee Benny Hill ayaa mar kale soo noqday
Dadka aan la tallaalin ayaa laga mamnuucay inta badan goobaha caamka ah ee...
Jet2 ayaa amartay 15 diyaaradood oo cusub oo A321neo ah
Halkee iyo Goorma ayay VIP-yada ugu sarreeya ka sameeyaan Suuqa Socdaalka Adduunka
Heshiis cusub oo ay si wada jir ah u ansixisay Pan Pacific...
Doorka Mareykanka ee UNWTO cusub?
Sharciga cusub ee Midowga Yurub ayaa ka mamnuuci doona booqdayaasha aan la tallaalin...
Cilmi-baarista sayniska ee Arctic, Style Ruush
Qiiq sun ah ayaa hareeyay Delhi ka dib ciida Hinduuga
Diyaaradda Qatar Airways ayaa si degdeg ah u joojisay Duulimaadyadii ay ka qaadi jirtay Shan...
Hab-nololeedka ugu Fiican ee Caafimaadka Fiican 2022
Uganda oo Rakaab Imaanaya Hadda Xor u ah in ay Rakaab ku sii wataan ka dib...